'नाई नभन्नु ल' सिरिजबाट किन बाहिरिए जीवन ? – Namaste Filmy
'नाई नभन्नु ल' सिरिजबाट किन बाहिरिए जीवन ?
नेपाली फिल्म उद्योगमा सर्वाधिक सफल नाम हो ‘नाई नभन्नु ल’ । स्कृप्ट राइटरबाट निर्देशक बनेका बिकास आचार्यलाई यसै नामले उद्योगमा सफल निर्देशकको रुपमा उभ्याइदियो ।
बिकास मात्रै हैन ऋचासिहं ठकुरीदेखि अनुभव रेग्मी सम्मलाई सफल कलारकारको रुपमा चिनाउने काम यहि नामले गर्यो । हिरो जीवन लुईटेललाई पनि नाइ नभन्नु ल खेलेपछि धेरै दर्शकले चिने । यो फिल्म सफल भएसँगै जीवन एकाएक ब्यस्त बनेका थिए ।
बिकासले ‘नाइ नभन्नु ल’ सफल भएपछि धमाधम सिक्वेल बनाए । फिल्मको दोस्रो सिक्वेलमा जीवनबाहेक अरु कलाकार दोहोरिएनन् । त्यसपछि फिल्म बजारमा बिकास र जीवनको बिशेष जोडि बनेको चर्चा चल्यो । बिकासको हरेक फिल्ममा जीवन नछुट्ने अनुमान धेरैले गरे । त्यसो त नाइ नभन्नु ल पछि बिकासले बनाएको रिदममा पनि जीवन मुख्य भुमिकामा थिए ।
त्यसैले बिकासको हरेक फिल्ममा जीवन अनिवार्यजस्तै देखियो । तर नाइ नभन्नु ल को तेस्रो सिरिजमा एकाएक जीवन अटाएनन् । सो फिल्ममा जीवनलाई आर्यनले रिप्लेस गरिदिए । दर्शकले फरक फरक अडकल काटे । जीवन र बिकासको सम्बन्ध बिग्रिएको पनि धेरैले भने ।
अहिले नाइ नभन्नु ल को चौथो सिरिज मा पनि जीवन छैनन् । सुरुमा जीवनकै कारण फिल्म चलेको मानिए पनि पछि जीवनलाई किन छाडे त बिकासले ?
बिकासका अनुसार जीवनले अन्तिम अवस्थामा आएर फिल्म छाडेका थिए । ‘नाइ नभन्नु ल ३’ को छयांकन सुरु गर्ने अन्तिम समयमा जीवनले समय नदिएको बिकासले बताए । फिल्मको लागि जीवन निश्चित गरिए पनि समय नदिएपछि बिकास निकै तनावमा पनि परेका थिए । तर आर्यन सिग्देलले साथ दिएको उनको भनाई छ । यसबारेमा बिकासको अभिब्यत्ति अनलाइखबरमा प्रकाशित छ ।
दशैको दिनमै 'ठमेल डटकम' । सेन्सरले दियो पिजी
“प्रेम गीत”को ट्रिजर सार्वजनिक, ‘भ्यालेन्टाइन डे’मा प्रदर्शनमा आउने (भिडियो सहित )